We are google partner now.
We are proud to announce that we are the official Google Partner. We hope to support our customers with more business benefits as being part of the Google Team.
mission: your e-business partner -
We really want and try to be your long-term e-business partner, to stand by your side to fight against all odds, towardsawin-win time together. Even multi-national corporations and governments trust us. How about you?
vision:aworld-class tech-firm -
Thanks to our valued clients. We are now serving 1,700 domain-owners/ web site owners/ aka. e-business owners in Myanmar, plus 24 countries.
a game-changer +awinner -
In the past 21 years, our efforts of 'enabling Myanmar language software on pc', and 'developing earliest e-businesses in travel industry' did change the digital ecosystem in the country, making us win2National ICT Awards.
Justaclick away to your payment gateway,
If you are interesting to connect your business with online payment gateway services, please register and makeaappointment with us. We are really appriciate to invite you to discuss with us.
It consists of informational design, architechture design, visual design, conceptual design, user-interface design, grapghic design, etc.
e-Gov / Web Applications
Beyond the stage of an informational web site, web applications are the engines all e-business processes.
You can register .com, .net, .org, and .com.mm domains online. Domain registration is often first-come-first-serve basis. And with some smart investment, domains could become million-dollar business.
Search-engine optimization and search-engine marketing has become more and more vital to all e-businesses.
Google AdWords, Facebook ads, local banner ads are all available. Call our ad sales representatives at
09 506 2841
09 506 2482 Learn More
You can easily buy ad space inaprint media, whom we are representing asareseller. Click for details.
We own and manage the nation's largest online content (over 300,000 pages in English, Myanmar, and bi-lingual). Also being the largest web developer in Myanmar, we also manage thousands of domains and web sites for our valued clients.
Asaprint media, we produce an award-winning travel media has been trusted and valued by tourists and the businesses in the tourism industry.
Myanmar Language Software
Don't under-estimate this small pieace of software that changed the cyber-culture of Myanmar, and so many lives and businesses beyond that..
We welcome partners for web development outsourcing or e-business / software development outsourcing.
We mostly develop mobile apps for Android for now, which is the largest smart-phone user-base, especially in the developing world.
Millions of products are at your finger-tips. You can buy books on Amazon or high-end fashion products that nobody sells in Myanmar. We welcome vendors too, who want to sell and export.
We, the people of Myanmar's Net,
are the i-Engineers & e-Marketers who are serving thousands of e-business
entrepreneurs in 22 countries. Our valued clients varies from movie directors in
Hollywood to airlines and tour operators in Myanmar, and clinics in Australia.
Get your own territory
Helping to sell online
We're an ad agnecy.
We make language software.
Created on Sunday, 15 September 2013 04:22
Myanmars.Net ဟာ မြန်မာနိုင်မှာ အစောဆုံးနဲ အကြီးဆုံး Web Development Compnay ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ Website ပေါင်းများစွာကို ရေးဆွဲပေးနေပြီး၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံမှာ Clients များကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အတွက် World Class Services ပေးနေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော Web Development Company ဖြစ်ပါတယ်။
နယ်အဝေးက လူတွေ ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားက လူတွေကို ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရောက်လာအောင် ဘယ်လေယဉ်ပျံ က မှ ခေါ်လာမပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Myanmars.Net က လူကြီးမင်း တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေ ၊ ဈေး၀ယ်သူတွေကို လူကြီးမင်းရဲ့ " Internet ရုံးခန်း" ထဲကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရောက်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
"သင်ကိုယ်တိုင်က Internet မသုံဖြစ်သေးတာနဲ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် "Website မလိုသေးဘူး" လို့ မှားပြီး မဆုံဖြတ်မိပါစေနဲ ။ Internet သုံးကြတဲ့ လူတန်းစားနဲ အမြင့်ဈေးကွက်ကို ရောင်းဖြစ်ဖို့ က အရေးကြီးပါတယ်။"
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်စေမယ့် World Class Web Developer အဖွဲဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး မြန်မာ့ National ICT Award ၂ ကြိမ်နဲ လူရည်ချွန်ဆု၊ Web Design ဆု စတဲ့ဆုတွေ အများကြီးရခဲ့တဲ့ ထူချွန်တဲ့ Developer Team ဖြစ်ပါတယ်။
CNN, BBC, Yahoo တို့ကတောင် Myanmars.Net ကို Refer လုပ် ၊ Recpmmend လုပ်ကြတဲ့အပြင် ၊ New York Time မှာတောင် ပါခဲ့ဖူးပါတယ်။
Google မှာ ရှာကြည့်ရင် မြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတဲ့ Web Page သန်း ၂၀၀ ကျော်ထဲမှာ Top 10ထဲမှာ ပါပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ Web Designer+Developer တင်မဟုတ်ပဲ လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ e-Marketing Partner အဖြစ် Consultant အဖြစ် ရပ်တည်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ Internet မရခင်ကတည်းက နိုင်ငံခြားကနေ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် Website တွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Web Site တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုသမိုင်းက သက်သေထင်ရှား ရှိနေပါတယ်။
နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေနဲ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်၀င်ရောက်နိုင်ပါမယ်။
ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ က သင့်ပြိုင်ဘက်တွေက Internet နဲ နည်းပညာတွေသုံးပြီး သင့်ကို ကျော်တက်တာ ၊ သင့်ဈေးကွက်ကို လုယူသွားမှာကို ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။
တစ်နေ့ ၂၄ နာရီ၊ တစ်နှစ် ၃၅၆ ရက်လုံးလုံး ရုံးဖွင့်ထားသလို Computer က ၀န်ထမ်းတွေလိုပဲ Order တွေ ၊ မေးတာတွေ ၊ ငွေလက်ခံတာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ၊ ထုတ်ကုန် တစ်ခုချင်းရဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေ၊ ဓာတ်ပုံ ၊ ဈေးနှုန်းတွေ ဖော်ပြပြီး ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး က အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဖွင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ Online Catalog၊ Show Case လွှင့်တင်ထားနိုင်ပါတယ်။
သင့် ၀န်ဆောင်မှု ၊ ထုတ်ကုန်တွေ လိပ်စာကို Internet Directory မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
သင့် ရဲ့ www.yourcompany.com ဆိုတဲ့ လိပ်စာလေး ပေးလိုက်ရုံနဲ သင့် Product Catalog/Showcase ဟာ သူတို့စားပွဲပေါင်းကို စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Email/Website များနဲ Marketing လုပ်ခြင်းဟာ တခြား ကြော်ငြာ စာစောင်တွေရိုက်ပြီးပို့တာထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်ဆန်ထိရောက်ပါတယ်.
Service Packages of Myanmars.Net
for corporate businesses
Asafull-featured
Our corporate social responsibility (CSR) policy: We do not sell our services to alcholic, tobacco, nor MLM businesses.
Your e-Business Partner ©
If you dont's see the internet as an opportunity, it will becomeathreat. In two or three years time, the internet will become as commonplace in the office as the telephone.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် ဆိုတာ မရခင်ကတည်းက ဝဗ်ဆိုက်တွေကို တည်ဆောက်ခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင် (domain/ web site owners) စုစုပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အလုပ်အပ် ကြပါတယ်။
ဇော်ထွဋ်၊ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ
အမျိုးသား ICT ဆု ၂ ဆုရခဲ့တဲ့အပြင် မြန်မာ့ စံနှုန်းထားတွေထက် ကျော်လွန်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့စံမီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေနိုင်အောင် အမြဲ ကြိုးစား နေပါတယ်။ Research and development (R&D) isaprecious tool for us.
သန့်ဇင်ဦး၊ Development Director
We believe there'satremendous opportunity ahead, across the $5 trillion retail market globally.
Jeff Bezos, Founder/CEO, Amazon.com
Myanmar's Net ဟာ ကျွန်မတို့ customer တွေ ကြိုက်ရုံလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်မတို့ customer တွေရဲ့ customer တွေပါ ကြိုက်အောင် ကြိုးစားပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
စန္ဒာသိန်း၊ General Manager
The future ofacountry is built around4pillars. 1st is the education system. 2nd is the infrastructure. 3rd is the environment for innovation. And 4th is supportive government.
e-presence မရှိလျင် nobody knows that you exist လို့တောင် ပြောနေကြပါပြီ။ရှောင်လို့မရမဲ့အတူတူ ပြိုင်ဘက်ထက်ဦးအောင် နည်းပညာသုံးပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ Zar Ni Win Lwin, Web Developent Manager